The Lives Quruxda dhalan ah — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Waxa uu helay garaaca wadnaha a, uu xumad si ay u koraan yar maskaxda
Waxa uu ku xidhan yahay oo uu mama, Ilaah hore u ogyahay magiciisa
Waad laga sameeyay ekaanshaha Ilaah iyo ilmaha waa isku mid, isaga siin nolosha
Ha ku Nooshahay
walaalkiis Gacaliye, Waan ogahay laga yaabaa inaad qabto off waardiyayaasha
By abuur in iyada caloosha, si aad qalbigiinna oo xanuun adag ee
Dareenka ku xayiran, sida maxaabiista xabsiga kuwa
gacmaha ayaa la macaamiloodeen, laakiin ma doonayaa inaan qaato kaararka kuwa
stop Homie, oo ka feker doorashada
ilmaha Taasi maxalkeedii, iyadu waa run ahaantii ma heshay cod
Sidaas si dhab ah u baahan yahay iyada abo, si ay iyada jecel oo waxay ku reyreeyaan
Waxay barako Rabbiga ka, iyadu uma baahna in la baabbi'iyo
Gacantaadu yay ka raagin iyada mama, iyada jecel oo taageero iyada
Waxay xanuun hadda aad, u baahan yahay qof waxaa iyada
Laakiin ma ha yeelin in aad gabar ilmaha, nool uurka
"Sababta homie doonaa in aad la raadinaya indhaha iyada in ugu dhaqsiyaha badan,
Hey ma heli qaldan igu, fiiri Waxaan oggolahay in aan siiyo xuquuqda haweenka
Laakiin in uu sidoo kale loogu tala galay dumarka uurka, iyaga siiyaa nolosha!
saaxiibada qiimaha, Waxaan ognahay in ay tani laga yaabaa in ay dhaawacdaa
Waayo, kuwa idinka mid ah oo raba aad siiyey lahaa in ilmuhu dhasho
Laakiin ay goori goor tahay hadda, 'Keeni ilmahaaga ma aha agagaarka
Waan ogahay waxa ay dhaawacdaa in aad core, dembi la idin miisaankeedu hoos
Laakiin waxaan heysanaa News Good iyo qaar ka mid ah bogsashada aad u xanuun
Ciise Masiix yimid, Wuxuu u degay dhulka
Laakiin isagu ma aha iman waayo, dadka wanaagsan ama xitaa xaqa ah
Waxa uu dunida u yimid oo kaliya dembilayaasha nala mid ah
Sidaas haa uu dhab ahaan ka xumaaday, marka aan qaato nolosha ilmaha
"Sababta uu iyaga ka dhigay, laakiin wuxuu u yimid inuu naga badbaadiyo dhibaatadeenna
Waxa uu u soo iftiimaya light in uu na badbaadin karin ka our habeenkii
Waxa uu tirtiro ceeb oo dhan, homie uu inoo xaq ka dhigi kara
waxaa u qirto oo rumaysan in Mid ka mid ah kuwaas oo bixiyo qarashka
Isagu wuxuu u dhintay in aad meel, waxaa jira dhaaf at iskutallaabta, Waxa uu inoo siin karaa nolosha
Ilaah qudhiisu idin Nooleeya
Waxa uu noqon doonaa midigta waxaa, halkaas, halkaas
Jackie • August 19, 2013 at 9:07 waxaan ahay • Reply
Jacaylka Trip Lee!!! erayada qoto dheer la yaab leh, hadda waan garanayaa waxa ay ku odhan lahaayeen dadka ku saabsan ilmo iska soo ridid!! Trip Thanks!!
Diddleymomma • August 19, 2013 at 9:07 waxaan ahay • Reply
Tani waa si la yaab leh. Waxaan halkan fadhiya caawa walaashiis of walaalaha ah galgasho. Muddo sanado ah aan Momma la dagaallamay xaqiiqda ah in ay ka soo qaaday nolosha ilmaha ee. Ilaa Ciise u helay iyada saacad muqdiga, iyadu marnaba, daacad dareemi kara nabadda. Haddaba, Ciise waa Rabbi, iyada oo, ayay si buuxda loo sameeyey cusub. Haddaba iyadu waa wanaaggiisa iyo Dambi Dhaaf Xaakimkii kale oo ka dhigay go'aanka ah in caruurta ay soo rido oo ku naadinaysa.
Anigu waxaan ahay hal hooyo nafsaddayda. Your song qalbigayga runtii ku dhuftay si qoto dheer. Waad ku mahadsan tahay in aad samayso oo dhan! Inaannu idiin soo ducayno waayo, mar kasta!
Kilika Täbron • August 19, 2013 at 9:08 waxaan ahay • Reply
video Tani waxay ii mahad song xitaa more.
Humdaddy • August 19, 2013 at 9:08 waxaan ahay • Reply
this song jeclaada. Waxa ay ahayd waano isagoo u gebi ahaanba weyn ayay ii tahay in ay sii tukanayay in Ilaah ku dhamaan lahaa ilmo iska soo ridid ​​in America, laakiin sidoo kale in aan u baahanahay in la dhiiri geliyo dumarka iyo ragga dhallinyarada ee xaaladaha adag iyo ma iska riixaan sida ay halgan kula fikradda waaliddiinta ee isagoo. Waad ku mahadsan tahay sida song yididiilo!
Trip marnay waad ku mahadsan tahay this song uu si qurux badan u ii keena ilmada. Carruurtu waa hadiyad waxaa laga yaabaa in ay qaataan 9 bilood jeer adag tahay in la arko hadiyadda , oh laakiin waxa sidaas u qalantaa. Waad ku mahadsan tahay this song.